China Rechargeable fan kubva kuKennede Manufacture uye Factory | Kennede
Pedestal fan, Oscillating Fans, Electric Fan, Gadzirisa...
Izvo zvinotonhorera---Fani inogona kushanda kweinenge vhiki pane yakaderera-kumhanya. Mazuva maviri ari pakati-kumhanya uye maawa gumi nemashanu pane yakakwirira-kumhanya
Flexible fan - iwe unogona kugadzirisa muviri we fan kuti uite mweya wakakwana kukamuri yako diki musango.
Timer- kukubatsira kuchengetedza simba kana usingade kuyerera kwemhepo yakawanda paunenge wakarara
Hombe mubato & ruvara rwebhuruu-- inokodzera nharaunda yako yemisasa, inoipa inorema-basa uye yakavimbika chigadzirwa fungidziro
Inogadziriswa Fan Speed: yakaderera / yepakati / yakakwirira. Iva nesarudzo dzakawanda pasi penzvimbo dzakasiyana uye tembiricha dzakasiyana. Kuunza iyo yakasarudzika mushandisi ruzivo kwauri.
Yakanaka bhatiri remhando: isu tinoshandisa lithum kana Lead-asidhi bhatiri, iyo yakagadzirwa isu pachedu, inogona kuvimbisa mhando uye gore rimwe waranti.
Simba-Kuchengetedza Tekinoroji: Kuenzaniswa nemhepo inofefetera uye mamwe mafeni eshongwe, mafeni edu ane simba-rinoshanda uye anochengetedza simba. Izvo zvakare zvine hutano-hushamwari sezvo vateveri vedu vanogona kutenderedza mafambiro emhepo yekamuri yako.
DC Tekinoroji & Nesimba Inoshanda: Iyi feni yakanyarara inoshanda zvakanyanya simba! Iyi dhesiki fan inosarudza yakanyanya advanced DC mota ine mabhenefiti ari pachena anoshanda nesimba, akanyarara uye akareba sevhisi hupenyu. Kushandiswa kwesimba kunongova 3-24W, izvi zvinoreva chete 1 kWh inodiwa kwemaawa mazana matatu nemakumi matatu ekushandisa nguva dzose (zvishoma zvigadziriso), izvo zvinogona kuchengetedza 80% yemagetsi kana ichienzaniswa neAC mota mafeni! Kunze kwezvo, shandisa iyi inotonhorera fan ine air conditioner, ichawedzera 80% kushanda zvakanaka kweair conditioner!
Ultra Quiet Fan yeKamuri yekurara:Neyepamusoro kuyerera kwemhepo, iyi compact tafura fan inogona kunyatsozadzisa zvese zvaunoda. Inofambiswa neDC tekinoroji, iyo feni yemagetsi yakanyarara uye inoshanda kutonhorera chinyararire mukamuri kuti ugone kurara zvakanaka. Ruzha rwakadzikira kusvika pa25dB, zvakaenzana nerukova runobhuya kana kuzevezerana zvinyoro nyoro zvichiita kuti ive yakanakira imba yekurara, makamuri evana nemahofisi. Iyi fan yakanyarara yakanakira kurara zvishoma, vanhu vakuru nevana, rega iwe uve nehope dzakanaka.
Rechargeable 16 ”oscillating 3 inomhanyisa kure kudzora 3-mu-1 stand fan
Fani size: 16 inch
Kumhanya: 3 kumhanya kusarudzwa
Nguva: 1-7 awa timer
Bhatiri: 2x 6V 4500mAh rechargeable Lead-asidhi mabhatiri
Mwenje we LED: Chiedza cheusiku che LED
Mhepo modhi: Zvakajairika
Kure: Neremote control
Simba rinobuda: Kwete
3-mu-1: 3 mhando dzehurefu zvingasarudzwa
Cable kana plug: AC simba tambo yekuisa uye kuchaja
AC kana DC: AC/DC
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 2 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 60.2x34.5x50.8 cm
Rechargeable 12 ”oscillating 3 inomhanyisa tafura fan
Fani size: 12 inch
Bhatiri: 2x 4V 3000mAh rechargeable Lead-asidhi mabhatiri
Saizi yekatoni: 51.5x35.5x36.2 cm
Lithium bhatiri rechargeable 3 kumhanya osillating 9 ”tafura fan ine mwenje we LED
Fani size: 9 inch
Oscillating: Hongu (kuruboshwe uye kurudyi)
Bhatiri: 7.4V 3600mAh rechargeable Lithium bhatiri
Mwenje we LED: 12PCS 0.1W chiedza che LED
Cable kana plug:1mita yakajairika mbiri yepini tambo
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 4 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 56.5x37.5x41.1 cm
Zvakapfuura: Mist Humidifier yekushandisa kumba uye wega